ကျွန်မပြောသော ကျွန်မရဲ့အကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွန်မပြောသော ကျွန်မရဲ့အကြောင်း
Posted by manawphyulay on Aug 18, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 12 comments
ကျွန်မကိုသူငယ်ချင်းတွေကဒီလိုခေါ်တယ် ………… မနော
ရိုက်မယ်… အားလုံး ငြိမ်
ပစ္စည်းဆိုရင်………… ကိုယ့်မှာရှိတာ မြတ်နိုးတယ်။ လက်ဆောင်ရတာလေးတွေ တန်ဖိုးထားတယ်။
စာအုပ်………… သွေး၊ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း(စစ်အခြေအနေ)၊ နေမင်းတစ်ထောင်(မြန်မာပြည်အကြောင်းအစစ်အမှန်)၊ မလိခ၊ ၀င့်ပြုံးမြင့်ရဲ့ မိသားစုတစ်စု၏ကျရှုံးခန်း၊ သေသော်မှသည် သြော် ကောင်း၏၊ အဖြူကို မည်သူ အနက်ဆိုးသနည်း… စသည်
ကျွန်မရဲ့ဝါသနာ………… စာဖတ်ခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာကလိခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်း၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ ကြက်တောင်ရိုက်ခြင်း၊ ဘောလုံးကန်ခြင်း၊ မိုးရွာထဲ စက်ဘီးလျှောက်စီးရခြင်း၊
ကျွန်မရဲ့ အချစ်ဆုံးသူ………… အဲ… ဘယ်လိုပြောရမလဲ ဖေဖေနဲ့မေမေပေါ့
ကျွန်မရဲ့ အလေးစားဆုံးသူက………… ကျွန်မကို ဦးဆောင်လမ်းပြပေးတဲ့ ဖေနဲ့မေရယ် ပတ်ဝန်းကျင်က သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာအားလုံး… အားလုံး… အားလုံးပေါ့။
ကျွန်မကို အများဆုံးနားလည်မှုပေးနိုင်သူက………… လောလောဆယ် ဖေရယ်မေရယ် မောင်နှမတွေရယ် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရယ်… နောက် ဟဲဟဲ သူရယ်…. ….. ရယ်….
ရင်အခုန်ဆုံးအချိန်………… ဟိုတစ်လောက အလုပ်မှာ ရင်အခုန်မြန်ပြီး အသက်ရှူရပ်သွားဖူးတယ်။ (ဆရာဝန်က ပြောတယ် လည်ပင်းအရိုးကျီးပေါင်းဖြစ်တာတဲ့။ နားရမယ်တဲ့ ဟိုက်ရှာလပတ် သေရော)(ရင်ခုန်ရလွန်းလို့ ရူးမှာပဲ)
ဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်းမဲ့ဆု………… နတ်လူသတ္တ၀ါအပေါင်း ကျန်းမာချမ်းသာခြင်းများနှင့် လိုအင်ဆန္ဒများပြည့်စုံကြပြီး အေးချမ်းမှုအပေါင်း ရရှိနိုင်ကြပါစေ…
အချစ်ဆိုတာ………… ပြောရရင်တော့ အစစ်ပဲလိုချင်တယ်။ အတ္တကြီးတယ်ပြောပြော တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်ပြောပြော။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တကယ် မြတ်နိုးကြင်နာနားလည်မှုပေးနိုင်တဲ့ဘ၀၊ အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ ဘ၀လေးပေါ့။
ချစ်သူဆိုတာ………… မဖြေတတ်ဘူးရှင့်။ ကိုယ့်အပေါ် အရမ်းချစ်ပြီး နားလည်မှုများနှင့် တစ်သက်လုံး လက်တွဲသွားမယ့်သူပေါ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဒီလိုထင်တယ်………… လိုအပ်ချက်တွေ များနေသောသူ
မှတ်ချက်။ ။ ရွာသူရွာသားတွေရဲ့အကြောင်းလေးလည်း ပြောခဲ့ပေးပါဦးနော်။
အယ်….ဒါလေးမြင်တော့ ဆယ်တန်းတုန်းက ရေးပေးပါလေး သတိရသွားပြီ….။ ခု အာ့လေးတွေ မမြင်တော့…။ ကိုယ်ရေးခဲ့တာလေးတွေ ပြန်မြင်ရင်တော့…အဲ့ချိန်တုန်းက အတွေးတွေနဲ့ ခုဘတ်နေတဲ့အသက်မှာ တွေးတဲ့အတွေးနဲ့ အတော်များကွာသွားပလား သိချင်သေးတယ်…။
မပြောင်းတာ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်….
ပြောပါတယ်…O သွေးတွေက လုပ်ချင်တာ လုပ်ရချိန်၊ လိုချင်တာရချိန်က အလှဆုံးဆိုတာ….
ဟုတ်ပါ့ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်နေရရင် ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့တွေပဲနော်။ မနောတော့ အသက်သာ ဘတ်လာတာ ကိုယ်ထင်ရာ စိုင်းနေတုန်းပါပဲ အဟိ:mrgreen:
ကိုယ်တိုင်ရေး ကိုယ့် အကြောင်း ပို့(စ) လေးပေါ့လေ။
ဟုတ်တယ် ကင်းကောင်လေး ပြောသလို ရေးပေးပါကို သတိယတယ်။
ရေးပေးပါ ကို သတိရတယ်
အဲ.. တစ်ခုပဲ လိုတယ်
ကိုယ် ဆွဲတတ်သလို ဆွဲတဲ့ ပုံ
ကွက်စ် တိ ပဲ
ဟုတ်ပါ့ ဆွဲချင်ရာဆွဲတဲ့ ဒီဇိုင်းအကြောင်း နကန်းတစ်လုံး နားမလည်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာ ထည့်ရေးဖို့ ကျန်သွားတယ် အဟိ..
မနောဖြူလေးအကြောင်းပဲ လာဖတ်သွားတယ်နော်… ပုလဲဖြူလေး အကြောင်းကတော့ ဒိုင်လျို လိုက်ဦးမယ်…နောက်မှ တိုးတိုးလေးပြောပြမယ် ..ခ်ခ်
ပုလဲဖြူလေးဆိုတော့ တန်ဖိုးရှိပြီး စိတ်ထားကောင်းမယ်လို့ ထင်မြင်မိတဲ့အတွက် ပြောပြစရာ မလိုတော့ဘူး ထင်ပါတယ်နော်…
အဟိ … မနော တွေးသလို မထင်ပါနဲ့ .. မနော တွေးသလို မမြင်ပါနဲ့ …
အဟိ … ကောင်းပါတယ် (စိတ်ညစ်ဖို့ …)
မနောနဲ့ ကျုပ် စ သိ တာ ဘယ် လောက်ကြာ ပြီလဲ ဆို တာ ပြန်စဉ်းစားနေတာ
လေးပေါက် မမှတ်မိတော့ဘူးမလား…. ခုတော့ မေ့ပြီပေါ့လေ…